शनिबारदेखि पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुने ! - Laltin Media
Home»इकोनोमी»शनिबारदेखि पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुने !
शनिबारदेखि पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुने !
पेट्रोलियम व्यवसायीले शनिबारदेखि पेट्रोल पम्पहरू बन्द गर्ने भएका छन् । कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राखेर दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका व्यवसायीले शुक्रबार निगमको डिपोबाट हुने ढुवानी बन्द गरेका छन् । निगमको डिपोबाट बिक्रेताका लागि हुने ढुवानी बन्द गरिएको र शनिबारदेखि सबै पम्प बन्द गरिने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए । माग पूरा नभएसम्म निरन्तर पम्पहरू बन्द हुने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष प्रधानले भने, “निगमले तीन पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्दा व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिसन वृद्धि गरेन । मूल्य वृद्धि गर्दा वृद्धि हुने र घट्दा घट्ने व्यवस्थालाई निगमले तोड्यो माग पूरा नहुँदासम्म सबै पम्प बन्द गर्छौं । ” कमिसन कटौती भएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घलगायतले संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनका कारण १४ सय ट्याङ्कर र करिब एक हजार बुलेटबाट पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको दैनिक आपूर्ति प्रभावित भएको छ । निगमका अनुसार नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र साझाको पम्प भने खुला हुनेछन् । व्यवसायीसँग पटकपटक छलफल भए पनि निगमले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगमलाई शुक्रबार प्राप्त मूल्यसूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई १५ दिनमा करिब पाँच अर्ब २१ करोड रुपियाँ घाटा हुने भएको छ ।